Sidee si ay u gudbiyaan Music & Playlists ka iPhone, iPad in Computer
> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan Music & Playlists ka iPhone, iPad ama iPod in PC
Part1: Faa'iidooyinka wareejinta music in PC
Part2: Music Transfer ka iPad in PC gacanta iyada oo aan wax software
Part3: music Transfer ka iPad in PC la TunesGo
Si aad u noqoto sax ah iyo in ay hal dhibic ka jira tobanaan kun oo faa'iidooyinka music iyo warbaahinta kale files gudbaayo PC. User ayaa jecel yahay oo keliya ma aha meel amaan ah oo la xiriirta kaydinta warbaahinta laakiin waxa uu sidoo kale ka mid ah khatarta ah ee khasaaraha music iyo keenta mashaqada kasta oo kale oo ay sabab u tahay qalab khaldan. Si aad u hesho sida ugu fiican ee arrintan la xiriira waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in tallaabooyinka waxaa lagu soo bandhigay in tutorial waxaa kaliya ma ahan raacay talaabo talaabo ah, laakiin sidoo kale user ka heli karo faa'iidooyinka ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka ka mid ah wareejinta music ka qalab qaadan karo si loo PC ama laptop waxaa lagu sharraxay under:
The music iyo maamulka warbaahinta noqdo mid fudud oo toos ah. Iyadoo la dhisay hawlaha Mac iyo PC user a heli karo xarumaha maamul ee ugu wanaagsan ee u PC iyo laptop by badbaadinayo music ah. Faa'iidada maamulka Tani waxay sidoo kale waxaa ka mid ah dayanayaan music in ay meelo badan, abuurista gurmad oo u gudbaayo kaydinta warbaahinta dibadda sida iyo marka loo baahdo.
Goobta lagu kaydin jiray oo PC aad uga badan tahay wax iDevice qaadi karo. Terabytes ee kaydinta ee hadda lagu soo bandhigay marka ay timaado PC drives adag oo sabab la mid ah waxa aad u muhiim ah in la ogaado in meel bannaan oo tan weligeed ah saamaxaya kuwa isticmaala si aad u hesho kumanaan song hal meel si ururinta weyn waxaa lagu dhisay. Waxaa sidoo kale ma ahan oo keliya ku egtahay music user ayaa sidoo kale ku dari kartaa oo badbaadin ah qaabab kale sida mp4, 3GP iyo wma.
Wixii user cusub diinta warbaahinta waa shaqo adag sida isticmaalka app ma aha mid fudud oo dhan. Isticmaalka PC ka user inay hubiyaan in ay qaabab file music yihiin diinta kale ilbiriqsi gudahood ka dhigi kara. Barnaamijyada software sida Factory Qaabka ayaa nolosha u fududahay kuwa isticmaala oo doonaya in ay si gaar ah loogu badalo music ee macruufka ah ama Android. The Casharrada dheer in timaaddo sidoo kale si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira oo u ogolaanaya in ay isticmaalaan software si hufan.
Waxaa jira tobanaan kun oo qalab bilaash ah laga heli karaa internetka oo loo isticmaali karo si loo hubiyo in xogta la wareejiyo computer waxaa falanqeeyay si user ah ka beddeli kartaa iyo tirtiri content haddii loo baahdo. Waxa kale oo saamaxaya kuwa isticmaala in ay takooraan heesaha oo siday u kala Zaman, kuwii gabayaaga ahaa iyo rating guud ahaan in ay online kala duwan madal ayaa la siiyaa si ay xoogaa in si gaar ah.
Mid ka mid ah kor lagu soo xusay waxaa jira boqolaal faa'iidooyin kale oo aan lagu soo koobi karaa in yar this article iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in wax ku ool ah ula warbaahinta sida ay tahay doonista iyo rabitaanka waa sida riyo ii rumowday agtooda user PC iyo wareejinta warbaahinta in ay PC ama Mac adeegta ujeedada sidoo dhammaan dhinacyada sida. Waa mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu fiican oo aad u hubiso in music la beddeli karin ka dibna dib ugu soo qalabka wareejiyo aan arin kasta halka marka ay timaado qalabka markaas waa adag tahay in aad noola ama laga gooyay qaybaha music rabin, ka dibna u badbaadin sida inta badan isticmaala kuma bixio casriga ah marka ay timaado macruufka ama xataa android.
Part2: Transfer Music ka iPad in PC gacanta iyada oo aan wax software
Waa ka ugu fudud oo dhan geeddi in user a qaataan karaa si loo hubiyo in ugu wanaagsan ee la sameeyo arrintan la xiriira. Si aad u hubiso in user buuxinayo natiijada waxaa lagula talinayaa inay raacaan talaabada tutorial talaabo si user marnaba wajahaya arrin kasta oo arrintan la xiriira. Ka dib markii yihiin tallaabooyinka ay user a waa in ay raacaan si ay u sameeyaan wixii kaloo ah:
i. The iPhone ama iDevice kasta oo kale waa in lagugu xiro PC la asalka USB cable in la bilaabo nidaamka:
ii. Marka la sameeyo user markaas u baahan yahay in la hubiyo in iExplorer la bilaabay on PC ama Mac hadba loo isticmaalay:
iii. Laga soo bilaabo halkan user u baahan yahay in dhirtuba Music> playlist ku habboon waa in loo soo wareejiyo si loo hubiyo in hannaanka sii habsami leh:
iv. User ayaa markaas u baahan yahay inuu riix furaha Ctrl iyo guji heesaha oo dhan ama playlists in ay tahay in lagu wareejiyo PC. Marka doorashada ayaa ka dibna la Transfer Jidka> wareejiyo playlist dhan si ay gal ay tahay in la soo xulay:
v. On suuqa kala socda in kor booda user ay u baahan tahay in la hubiyo in folder bartilmaameedka la doorto gal PC meesha playlist ama heesta waa in lagu wareejiyo. Inta badan dadka isticmaala ay u noqon doontaa labada Mac iyo PC folder Music. Tani waxay sidoo kale dhameystiray habka buuxda sidii loo baahnaa la sameeyey arrintan la xiriira:
Music Qaybta 3.Transfer ka iPad in PC la TunesGo
Wondershare Loo yaqaan horumarinta barnaamijyada software in ay yihiin gobolka of farshaxanka iyo sabab la mid ah waxa ay haatan u soo saaraa TunesGo taas oo ah mid ka mid ah software ugu fiican si loo hubiyo in music yahay gurmad oo keliya ma aha, laakiin sidoo kale ammaan ah. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in geedi socodka soo socda waxaa la socda in arrintan la xiriira:
i. User wuxuu u baahan yahay in uu soo bixi software ka URL http://www.wondershare.com/tunesgo/ iyo in ay raacdaa tilmaamaha si aad u hubiso in software ah la geliyo. Marka sameeyo waa in la bilaabay si interface ugu weyn ee u muuqataa,
ii. IDevice ka oo xogta waa in lagu wareejiyo waa in lagu lifaaqo PC ah iyadoo la kaashanayo cable USB:
iii. Software ayaa hubin doona in warbaahinta la heli karo qalabka la ogaado oo soo bandhigay:
iv. The song in ay tahay in loo wareejiyo PC la soo xulay oo dhoofiyo PC sida lagu muujiyay shaxanka hoose si loo hubiyo in hannaanka dhameystiray: